Endrik'io pejy io tamin'ny 19 Septambra 2019 à 06:38
5 018 octets ajoutés , il y a 1 an
Endrik'io pejy io tamin'ny 19 Septambra 2019 à 06:16 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 19 Septambra 2019 à 06:38 (hanova) (esory)
== Ny orim-bintana sy ny zavatra mifandray aminy ==
=== '''Ny orim-bintana sy ny singa efatra''' ===
Araka an'i [[Jobily Rakotoson]]<refsup>[[Fanandroana name="malagasy#cite%20note-:0" -2|]]</sup> dia mifandray amin'ny fanandroana ny singa tsirairay, dia ny [[rano]] sy ny [[rivotra]] sy ny [[tany]] ary ny [[afo]].
==== Rano ====
Atao hoe vintan'ny [[rano]] ny Asorotany sy ny Alakarabo ary ny Alohotsy.
==== '''Rivotra ===='''
Vintan'ny [[rivotra]] kosa ny Adimizana sy ny Adalo ary ny Adizaoza.
==== '''Tany ===='''
Vintan'ny [[tany]] ny Adaoro sy ny Adijady ary ny Asombola.
==== '''Afo ===='''
Vintan'ny [[afo]] ny Alahamady sy ny Alahasaty ary ny Alakaosy.
=== '''Ny vazantany sy ny zoron-trano''' ===
==== '''Avaratra ===='''▼
Lafy itoeran'ny vintana [[Adalo]] sy ny [[Alohotsy]] ny avaratra. Ao an-trano dia atao eo afovoany mahazo avaratra ny fatana. Ny avaratra dia vazantanin'ny fahefana sy ny fibaikoana ary ny fanjakana. Eo amin'ny misy ny Adalo no toerana fanajam-bahiny indrindra ao an-trano. Tandrify ny Alohotsy no fametrahana ny lovia sy ny sotro.▼
▲==== Avaratra ====
▲Lafy itoeran'ny vintana [[Adalo]] sy ny [[Alohotsy]] ny avaratra. Ao an-trano dia atao eo afovoany mahazo avaratra ny fatana. Ny avaratra dia vazantanin'ny fahefana sy ny fibaikoana ary ny fanjakana. Eo amin'ny misy ny Adalo no toerana fanajam-bahiny indrindra ao an-trano. Tandrify ny Alohotsy no fametrahana ny lovia sy ny sotro.
==== '''Avaratra atsinanana ===='''▼
▲==== Avaratra atsinanana ====
==== '''Atsinanana ===='''
Lafy itoeran'ny vintana [[Adaoro]] sy [[Adizaoza]] ny atsinanana. Vazantany natokana ho an'ny vavaka sy ny [[Razana (finoana malagasy)|Razana]] ny atsinanana ao an-trano. Eo atsinanana tandrify y Adizaoza no ametrahana ny siny ao an-trano. Ny faritra avaratra amin'ny rindrina atsinana, tandrify ny Adaoro, no asiana ny farafara.
==== '''Atsimo atsinanana ===='''▼
▲==== Atsimo atsinanana ====
==== '''Atsimo ===='''
==== '''Atsimo andrefana ===='''
==== '''Andrefana ===='''
Lafy itoeran'ny vintana [[Alakaosy]] sy [[Alakarabo]] ny andrefana. Faritra tsy madio sy tsy masina ary an'ny vahiny ny andrefana ao an-trano. Ao amin'ny tapany atsimo amin'ny rindrina andrefana (manandrify ny Alakarabo) no asiana ny varavarambe amin'ny trano, izay ivoahana sy idiran'ny soa sy ny ratsy. Tandrify ny Alakaosy no amelaran-tsihy hampandrosoana ny andriana. Eo koa no misy ny farafaran'ny vehivavy tera-bao izay akaikin'ny fatana ka tsara ho an'ny mpifana.
==== '''Avaratra adrefana ===='''
Ny lafin-tany avaratra-andrefana dia atao hoe [[Adijady]] ka ny lafin-trano avaratra-andrefana no omena azy. Atao hoe zorom-baravarankely koa ny eo.
=== '''Ny andro ao amin'ny herinandro''' ===
Manomboka amin'ny filentehan'ny [[masoandro]] ny andro malagasy ary manomboka amin'ny andro [[Alakamisy]] ny [[herinandro]]. Ny iray volana ao amin'ny [[tetiandro malagasy]] dia misy 29 na 30 andro. Samy manana ny maha izy azy ireo andro ao amin'ny herinandro ireo. Ny fanaovan-javatra fa tsy ny fahaterahana loatra no tena itandreman'ny Ntaolo sy ny Malagasy ankehitriny ny fisafidianana ny andro.
Andro voalohany ao amin'ny fanandroana sy tetiandro malagasy ny andro [[Alakamisy]]<sup>[[Fanandroana malagasy#cite%20note-:1-1|]]</sup>. Ny teny hoe ''Alakamisy'' na ''Lakamisy'' na ''Kamisy'' dia avy amin'ny teny arabo hoe الخميس / ''al-khamīs'' izay midika hoe "andro fahadimy".
Andro faharoa ny andro [[Zoma]]. Ny teny hoe ''Zoma'' na ''Azoma'' na ''Joma'' dia avy amin'ny teny arabo hoe الجمعة / ''al-jum‘ah'' izay midika hoe "andro fahenina". Amin'ny ankapobeny dia andro mainty ny Zoma, araka ny finoan'ny Ntaolo malagasy, ka natokana handevenana.
Andro fahatelo ny andro [[Asabotsy]]. Ny teny hoe ''Asabotsy'' na ''Sabotsy'' dia avy amin'ny teny arabo hoe السبت / ''as-sabt'' izay avy amin'ny teny hebreo hoe שָׁבַת / ''shabbat'' na avy amin'ny [[Fiteny hebreo|teny hebreo]] hoe ''shabbos'' izay samy manondro ny andro Asabotsy sady midika hoe "andro fitsaharana" na "andro fialan-tsasatra". Amin'ny ankapobeny dia andro "mibontsina" ny Asabotsy, araka ny fivoasana sy ny finoan-drazana malagasy, ka natokana hitomaniana sy hamoizana ny maty.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/974875"